Ezakamuva Archives - Page 551 of 555 - Impempe
Sibongiseni Gumbi Umqeqeshi weKaizer Chiefs, uGavin Hunt, uthi akakaze aphathiswe wumsebenzi ngekhanda ngale ndlela okwenzeka ngayo kusukela efikile kuMakhosi. UHunt oseqeqeshe esigabeni esikhokhelayo iminyaka engu-25, ukusho lokhu ngemuva kokuthi iqembu lakhe liphinde lalahla amaphuzu libambana […]
Ifike ungasekho ujantshi obheke kwiwini iSundowns eThekwini
December 19, 2020 Impempe.com
OkaDonga Gumbi Isitimela seMamelodi Sundowns obekuthiwa asivimbeki uma sesibheke kwiwini, sifike sabhajwa eThekwini njengoba iLamontville Golden Arrows ivele yawujika ujantshi wabheka eceleni, sabuyela ePitoli singawatholanga amaphuzu aphelele, eSugar Ray Stadium, eClermont, ngoMgqibelo. Abafana Bes’thende abavumanga […]
UZwane akeneme ngendlela edlala ngayo iChiefs kwiDiski Challenge yize iwina
Sihle Ndlovu Uzwakale engeneme nakancane umqeqeshi weKaizer Chiefs, u-Arthur Zwane, yize iqembu lakhe lishaye iTS Galaxy ngo 3-2 emdlalweni weDstv Diski Challenge, ngoMgqibelo, eFNB Stadium. Amagoli eChiefs ashaywe uHappy Mashiane, amabili, kwathi elinye labekwa enethini […]
UZuma uthi uyawubona umehluko yize besafunda isitayela somqeqeshi kuChiefs
December 18, 2020 Impempe.com
Sibongiseni Gumbi Ukubuyela enkundleni kukaDumisani Zuma yinto cishe iningi labalandeli beKaizer Chiefs, ebeliyibheke ngabomvu kwazise uyaye alitakule sekunzima iqembu. UZuma usethembise ukuqhubeka asize iqembu kanti uthi isimo asisibi ngendlela abaningi abacabanga ngayo. Uthe Amakhosi azosuka […]
okaDonga Gumbi Kube ngumphumela othathe iKaizer Chiefs wayiphonsa ngasemsileni kuDStv Premiership kodwa uLebogang Manyama ukholwa ukuthi umdlalo wabo neSuperSport United ube yisisekelo sesiqalo esisha kuleli qembu laseNaturena. Amakhosi adlale kahle kulo mdlalo obuseLucas Moripe Stadium […]